लोकप्रिय E ई बाइक बिक्री को लागी - तपाइँको आवश्यकता पूरा गर्नुहोस् | ebike Shuangye
घर ब्लग समाचार लोकप्रिय E ई बाइक बिक्रीका लागि - तपाईंको आवश्यकता पूरा गर्नुहोस्
मिति ： २०१-2020-०07-० Categories कोटीहरू ：समाचार दृश्य ： ० विचार
ई बाइक भएकोले तपाईंलाई लामो, छिटो र अगाडि बढ्न सवारी बनाउँदछ। एक इलेक्ट्रिक बाइक चलाउने यो गर्मीमा सूर्यको प्रकाश र सोख खेल्ने र रमाईलो गतिविधिको उत्तम अवसर हो। हालसालै बाहिरी गतिविधिहरू जस्तै इलेक्ट्रिक स्केटबोर्डहरू, वयस्क इ स्कूटरहरू र इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बाइकहरू, सबै सामाजिक समूहहरूमा लोकप्रिय हुँदै गएको छ। र यो किन होeबाइक बिक्री को लागी के आकाश गएको छ? किनभने अब, प्रत्येक इ-बाइक सुपर आधुनिक देखिन्छ र एकल चार्जमा 40० देखि k०km सम्म लिनको लागि पर्याप्त पावर प्याक गर्दछ।
त्यसोभए, बिक्रीको लागि कस्तो प्रकारको ई बाइक तपाईंको ग्राहकहरूको लागि उपयुक्त छ जब उनीहरू इलेक्ट्रिक बाइक किन्न विचार गर्छन्? यो आधारभूत प्रश्न हो। उत्तरले ई बाइकको छनौटलाई असर गर्दछ। तपाइँ कसरी तपाइँको मुख्य बजार को लागीeबाइक को प्रकारहरु छनौट गर्नुहुन्छ? क्लासिक सिटी इबाइक, माउन्टेन इबाइक वा फोल्डिंग ebike बाट पनि त्यहाँ छनौट गर्न धेरै छन्। र यो पोष्ट बिक्री को लागी popular लोकप्रिय ई बाइक को सिफारिश गरीन्छ।
१. लुकेका ब्याट्री माउन्ट ई बाइक
क्लासिक माउन्टेन बाइक निर्माण र लुकेको ब्याट्री डिजाइनको साथ - कसैले पनि यसलाई बिजुलीजस्तो लाग्दैन। यसको समग्र शक्तिशाली, राम्रो निर्माण र स्पोर्टी देखिन्छ। यो बिक्रीको लागिeबाइक मध्ये एक हो जुन तपाईंलाई घर वा कार्यालयबाट बाहिरका खेलहरूमा लैजान्छ। त्यहाँ निलम्बन एल्युमिनियम मिश्रित फोर्क फोर्क, र २ 26. inch इन्च पा wheel्ग्रा, २.27.5..29 डिग्री र २ ″ ″ पा by्ग्राले पछाडि बाइकलाई सजिलैसँग सजिलैसँग सहयोग पुर्‍याउँछ।
यो V 36V १०Hlithium ब्याट्री हटाउन योग्य छ, सुविधा पनि एक ब्याट्री योग्यता हो। यो कुञ्जीको साथ बाहिर निकाल्न सजिलो छ, र यसलाई अन्य ठाउँमा लग्नुहोस् ई बाइकलाई सार्न बिना चार्ज गर्न। जबकि गियर प्रणाली व्यापार मा सबै भन्दा राम्रो एक हो, मानक अनुमान 10 गियर छ। त्यस्तै, फ्रन्ट-रियर डिस्क ब्रेक सजिलै प्रभावकारी छन्, तपाईलाई गतिबाट पनि सुरक्षित रोक्न। अधिकतम गति २k किलोमिटर / घन्टादेखि 21 25 केमि / घन्टा फरक शक्ति अनुसार २w० डब्लु देखि w०० डब्लु मोटरमा छ। र यदि तपाइँको ग्राहकहरु उनीहरुको सवारी ट्रयाक गर्न को लागी, योeबाइक बिक्री को लागी एक LCD स्क्रीन पनि वास्तविक समय आँकडा डाटा को साथ प्रदान गर्दछ।
२2इन्च शहरको इलेक्ट्रिक साइकल
सबैको साथ शहरको सडकमा टन मजा छ ई-बाइकको साथ। सबैभन्दा पहिले, यो बिक्रीको लागि शीर्ष श्रेणीकोeबाइक हो। यो लामो र विविध शहर कम्युटको साथसाथै पहाडी इलाकाको सामना गर्न निर्मित छ। क्लासिक स्टेप-थ्रु डिजाइनको साथ, यो कुनै पनि अवस्थामा उत्तम देखिन्छ। एल्युमिनियम मिश्र फ्रेम केवल हल्का तौल मात्र हो तर यो अविश्वसनीय टिकाऊ हो, जबकि इलेक्ट्रिक बाइक बाहिरबाट पनि छोडियो। यो शहरको ई बाइक बिक्रीको लागि गुणस्तरीय मेकानिकल डिस्क ब्रेक र २१ गीरहरू सजीलो सवारीका साथ आउँदछ। संयुक्त, यी तपाइँलाई छिटो त्वरण, सटीक स्टीयरिंग, र एक सुरक्षित रोक्न।
Hidden 36v १०ah हटाउन योग्य ब्याट्रीको साथ लुकेका ब्याट्री डिजाइनको प्रयोग गरेर, ब्याट्री completely- hours घण्टामा पूर्ण रूपमा चार्ज हुन्छ, जुन लगभग सबै ई-बाइकहरूको लागि समान हो र यस बाइकलाई एकल चार्जमा 10० किमिदेखि k० केमि यात्रा गर्दछ। यो W 4०W उच्च गतिको ब्रशलेस मोटरले सुसज्जित छ, जसले तपाईंलाई k० किमी / घण्टाको अधिकतम गतिमा यात्रा गर्न मद्दत गर्दछ, कुनै ग्यारिंग गियर-परिवर्तन बिना।
3. २ 26 "फ्याट टायर इलेक्ट्रिक बाइक
एक टिकाऊ, भारी शुल्क माउन्टेन इलेक्ट्रिक बाइकको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? किन तपाईं यसलाई एक छान्नुहुन्न। निपुण र राम्रोसँग निर्मित, बिक्रीको लागि यो ई बाइकको दृष्टिकोण र शैली छ र तिनीहरूलाई देखाउन डराउँदैन। २ * * inch. inch इन्च पाels्ग्राले एउटा ठूलो पकड प्रदान गर्दछ जुन तपाईंलाई चिकना क concrete्क्रीटबाट बजरी सडकसम्म बाटोमा राख्दछ। एल्युमिनियम मिश्र धातु फ्रेमले यस ई बाइकलाई सुन्दर र हल्का र कडा परिधान गर्दछ, सबै एकै समयमा। औंठा थ्रटल र २१ गियरहरू जुन तपाईंलाई 26०-4.0० किलोमिटर / घन्टामा अधिकतम गतिमा पुग्न मद्दत गर्दछ। उच्च शक्ति र ठूलो क्षमता यो फ्याट टायर इलेक्ट्रिक बाइक हाइलाइट मध्ये एक हो, w 21०w देखि 30० डब्लु brushless मोटर र v 40v बाट v 350v हटाउन योग्य लिथियम ब्याट्रीको साथ आउँदछ।
यदि तपाईं बिक्रीको लागि लोकप्रिय ई बाइकहरूको बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं अघिल्लो लेखहरू ब्राउज गर्न वा हाम्रो भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ आधिकारिक वेबसाइट, पनि तल तपाईंको सन्देश छोड्न सक्छ।
Tags:e बाइक बिक्री को लागी लोकप्रिय ई बाइकहरू
अघिल्लो: पावर असिस्ट बाइक भनेको के हो?
अर्को: Reasons कारण मानिसहरूले इलेक्ट्रिक कम्यूटर बाइक रुचाउँछन्